ULeopoldo Panero. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Ezinye izinkondlo | Izincwadi Zamanje
ULeopoldo Panero. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Ezinye izinkondlo
ULeopoldo Panero Wazalelwa e-Astorga, eLeón, ngo-Agasti 27, 1909. Wafunda eValladolid futhi lapho kwakhanya ngethalente lezinkondlo zakhe, lapho azama khona ivesi lamahhala, i UbuDadafuthi i ukuziphendulela.
Izihloko ezifana Igumbi elingenalutho, amaVesi al Guadarrama, Abhalwe ngawo wonke umzuzu o Ingoma yomuntu. Futhi okukhunjulwa kakhulu UCandida. Phakathi kokunye, wawina iNational Prize for Literature ngo-1949. Lokhu kukhethwa kwezinye zezinkondlo zakhe. Ukukhumbula noma ukukuthola.
1 Leopoldo Panero - Izinkondlo
1.1 Ekumamatheka kwakho
1.2 Kugeleza kusuka eSpain
1.3 Umfana wami
1.4 Izandla ezingaboni
1.5 Indaba esobala
1.7 Kulokuthula okunamaphiko kwenhliziyo ...
Leopoldo Panero - Izinkondlo
Ukumamatheka kwakho kuqala,
njengomsindo wemvula emafasiteleni.
Ntambama idlidlizela phansi kokusha,
nephunga elimnandi liphuma emhlabeni,
iphunga elifana nokumamatheka kwakho,
vele unyakazise ukumamatheka kwakho njengomnyezane
nge-aura ka-Ephreli; amabhulashi emvula
futhi ukumamatheka kwakho kulahlekile ngaphakathi,
ngaphakathi kuyasulwa futhi kuhlehliswe,
futhi kungithatha umphefumulo,
Ngimangele, eceleni kwakho.
Ukumamatheka kwakho sekuvele kusha phakathi kwezindebe zami,
futhi ukuhogela kuyo ngingowomhlaba ohlanzekile,
sekuvele ukukhanya, sekuvele ukuqala kwantambama
lapho ilanga likhanya futhi,
ihanjiswe kancane ngumoya,
kufana nokumamatheka kwakho okuphelayo
ishiya ubuhle bayo phakathi kwezihlahla ...
Kugeleza kusuka eSpain
Ngiphuza ekukhanyeni, nangaphakathi
ngothando lwami olushisayo, izwe lodwa
ezinikela ezinyaweni zami njengegagasi
wobuhle obugqamile. Ngingena emphefumulweni wami;
Ngicwilisa amehlo ami esikhungweni esiphilayo
yesihe ukuthi ngaphandle kwemingcele immolates uqobo
ngokufana nomama. Futhi acwazimulayo
isithunzi seplanethi umhlangano wethu.
Ngemuva kolwandle olucwebile ama-steppe ayakhula,
kanye newa elinsundu, nomfudlana osamile
ngaphansi komhosha ongazelelwe
emisa inhliziyo futhi iyenze mnyama,
njengoba ukwehla kwesikhathi sekuqedile
ukuthi kuNkulunkulu kuvela endleleni yakhe.
Kusukela ogwini lwami oludala, okholweni engizizwa ngalo,
ekukhanyeni kokuqala okuthathwa ngumphefumulo omsulwa,
Ngihamba nawe, ndodana yami, ngehla ngomgwaqo ohamba kancane
lolu thando olukhula kimi njengobuhlanya obumnene.
Ngihamba nawe, ndodana yami, ngiyaphithizela
wenyama yami, izwi lokujula kwami ​​okuzolile,
umculo oshaywa umuntu angazi ukuphi, emoyeni,
Angazi lapho, ndodana yami, kusuka ogwini lwami olumnyama.
Ngiyahamba, ungithatha, ukubuka kwami ​​kuba yithemba,
ungiphusha kancane (ngicishe ngizwe amakhaza);
Ungimemela emthunzini ocwila ezinyathelweni zami,
Ungihudula ngesandla ... Futhi ngokungazi kwakho ngiyethemba,
Sengivele ngilahlile uthando lwakho ngingashiyanga lutho,
nginesizungu esibi, angazi kuphi, ndodana yami.
Ukungayinaki impilo yami
eshaywe ukukhanya kwezinkanyezi,
lapho uhamba, izandla emthunzini,
mina, Kristu wami
yonke inhliziyo yami, ngaphandle kokuncipha, iphelele,
virginal nokuqhubeka, kuphumula
empilweni ezayo, njengesihlahla
uphumula ebusheni, obondlayo,
futhi kuyenza iqhakaze futhi ibe luhlaza.
Yonke inhliziyo yami, ember yomuntu,
akusizi ngalutho ngaphandle kothando Lwakho, ngaphandle kwakho ungenalutho,
Ngimuzwa efuna wena, njengempumputhe,
enweba lapho uhamba ngezandla ezigcwele
Futhi njengamaphupho inhliziyo yami ifiphele
Yokuba uphile… Owu udaba oluhle obala!
Futhi njengoba ngaleso sikhathi ngizwa uNkulunkulu emathunjini ami.
Kepha esifubeni sami manje wukoma obekungumthombo.
Ekuseni ukukhanya kwentaba kuyakhanya
cwilisa izigodi eziluhlaza okwesibhakabhaka ...
Futhi leli kona laseSpain lifana namaphupho,
leli phunga leqhwa imemori yami elizwayo!
Indaba emsulwa nebala, lapho iziboshwa,
njengezimbali eziseqhweni, sihlala
ngolunye usuku, lapho emthunzini wamahlathi aminyene
lapho kuzalwa khona iziqu esizikha lapho siphila!
O intwasahlobo emnandi edlula emathanjeni ami
futhi njengasemaphusheni ...! Nakhona savuka.
Nkosi, ugodo oludala luyawa,
uthando oluqinile oluzalwa kancane kancane,
amakhefu. Inhliziyo, isiwula esimpofu,
ukhala yedwa ngezwi eliphansi,
kwesiqu esidala esenza ibhokisi elibi
Uyafa. Nkosi, ngithinta i-oki elisemathanjeni
ngihlehlisiwe phakathi kwezandla zami, futhi ngiyakunxusa
ebudaleni obungcwele obuqhekezayo
amandla akhe amahle. Igatsha ngalinye, liyifindo,
Kwakungubuzalwane bobisi futhi konke ndawonye
banikeze umthunzi ojabulisayo, amabhishi amahle.
Nkosi, imbazo ibiza isigodo esiyisimungulu,
shaya ngokushaya, futhi ugcwele imibuzo
inhliziyo yomuntu lapho uzwakala khona.
Kulokuthula okunamaphiko kwenhliziyo ...
Kulokhu kuthula kwenhliziyo okunamaphiko
umkhathizwe weCastile uphumule,
nokuhamba kwefu ngaphandle kogu
ithafa eliluhlaza okwesibhakabhaka ngobumnene.
Kusele ukukhanya nokubukeka kuphela
ukushada isimanga sobabili
kusuka ezweni elishisayo eliphuzi
kanye nohlaza lwesihlahla se-okhi esinokuthula.
Isho ngolimi inhlanhla
wobuntwana bethu obabili, mfowethu,
futhi ulalele ukuthula okukuqambayo!
Umkhuleko wokuzwa emanzini amsulwa,
ukuhleba okumnandi kwasehlobo
nephiko likabhabhulini emthunzini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izinkondlo » ULeopoldo Panero. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Ezinye izinkondlo